Xiriirka Kubada Cagta Adduunka Ee FIFA Oo Todoba Kooxood Oo Reer Yurub Ah Shir Hoose La Qaadatay & Koob Cusub Oo Loo Qaban Doono | Saxil News Network
Xiriirka Kubada Cagta Adduunka Ee FIFA Oo Todoba Kooxood Oo Reer Yurub Ah Shir Hoose La Qaadatay & Koob Cusub Oo Loo Qaban Doono
Todoba ka mid ah kooxaha ugu waaweyn yurub ayaa wadahadalo la qaatay FIFA iyaga oo kala hadlay in la bilaabo tartan yar oo ku kici doona lacag aad u badan.
Wakiilada kooxaha Manchester United , Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain & Bayern Munich ayaa Arbacadii ka wada hadlay tartan yar oo lagu magacaabayo “Projec Tropy” sida laga soo xigtay New York Times.
Tartanka ayaa lagu badali doonaa tartanka Club World cup-ka kaas oo ay sanad walba ka qayb galaan 7 kooxood ee koobabka waaweyn ku guulaysta qaaraha adduunka laakiin ku fashilmay in uu qabto indhaha adduunka.
Tartanka ayaa bilaabmi doona 2021 iyada oo ay 24 kooxood ka qayb qaadan doonaan 4 sano iyada oo lagu heli doono lacag dhan 18 bilyan.
Qayb ka mid ah kooxaha ayaa ka iman doona yurub iyada oo ay ka mid yihiin kooxaha gaara Finalka champions League iyo Europe Leaue kooxda ku guulaysta 4-tii sano ee ugu dambaysay.
Kooxaha Koonfur America ayaa ku lahaan doona 4 kooxood iyada oo laba kooxood ka iman doonaan kooxaha Africa,Asiya iyo North America.
Booska ugu dambeeya ayaa lahaan doona koox ka socotad wadanka lagu qaban doono iyo kooxaha ka soo baxa is reeb-reeb loo qaban doono Koonfur America iyo Oceania.
Warbixin ay soo saartay FIFA ayaa lagu yiri: “Kulankii Arbacada wuxuu noo ogolaaday inaan fiirino xiisaha dhabta ah ee dib u habeyn buuxda ee Koobka Kooxaha Club World Cup iyo horumarinta qaab ciyaareed cusub oo tartan ah oo ka faa’iideysan doona bulshada kubada cagta adduunka oo idil.”